कोरोनाले बित्यास ! | NepalDut
मुस्ताङीलाई गाउ फर्काउन सकिन ःसांसद बिष्ट
कोरोनाले बित्यास !
विश्वका १ सय १४ भन्दा बढी देशहरुमा हाल देखिएको माहामारी कोभिड–१९ नोवल कोरोना भाईरसको संम्भावित संक्रमणबाट सुरक्षित रहन नेपाल सरकारले आज बुधबार देखि शिङ्गो मुलुक लकडाउन गरेको छ । सरकारले देश लक डाउन गरेसंगै सर्वसाधरण घरभित्रै सुरक्षित क्वारेन्टाईनमा बस्ने अवस्था आएको हो । कोरोनाले विश्वभर १४ हजार बढीको ज्यान गईसकेको छ ,भने छिमेकी देश भारतमा समेत यसको प्रभाव बढेको छ । नेपालमा पनि हालसम्म २ जना कोरोना संक्रमित भएको पुष्टि भईसकेको छ ।
सरकारले २ साता अघिनै लक डाउन गर्न पथ्र्यो ,यद्यपी ढिलै भएपनि देश लक डाउन भएको छ । सबै मानिसहरु घरभित्रै कैद भएका छन् ।सहर तथा गाउघरमा सवारी साधन चलेका छैनन् ,होटल ,पसल ,बैङ्क तथा बित्तिय संस्था सरकार नियमित काम ठप्प छन् । जैविक प्रकारको नया रोगले विश्वलाई थला बनाईदिएको छ । हामी नेपाली पनि यसको प्रत्यक्ष शिकार बनेका छौं ।
विगतको यही समय धार्मिक तथा पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङ पर्यटक तथा तिर्थालुले गुल्जार हुन्थ्यो । आज औशी तिथि । कागबेनी त आज तिर्थालुको भीडले खुट्टो राख्ने समेत ठाउ पाईदैनथ्यो ।कास्की पर्वत ,म्याग्दी हुदा सयौ सार्वजनिक सवारी साधनको लस्कर हुन्थ्यो ।म्याग्दी देखि मुक्तिनाथ सम्मका होटलहरु तिर्थालुले खचाखच भरिन्थ्यो । यहाका पर्यटन व्यवसायी तिर्थालुको सेवामा भ्याई नभ्याई हुन्थ्यो । कागबेनी र मुक्तिनाथमा तिर्थालुको चापले महोत्सवमयको अनुभुति दिलाउथ्यो । फुटपाथमा मुस्ताङका कोशेली र फलफुल बिक्री गर्नेहरुले व्यापारबाट मनग्ये लाभ लिन्थे । सवारी साधनले यात्रु ओसार पोसार गर्न व्यस्त हुन्थे । तर यसपटक सदा जस्तो यो रोनकमा कोरोना भाईरसले अभिसाप बनाईदिएको छ । अहिले आर्थिक लाभ भन्दा पनि ज्यान कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
चैते दशै औशी तिथिको एकसाता अघि देखिनै मुस्ताङले पर्यटक तथा तिर्थालु थेग्न मुश्किल पथ्र्यो । तर, औशी भएपनि कागबेनी श्राद्ध स्थल र मुक्तिनाथ मन्दिर सुनसान छ । कोरोना प्रभावका कारण यि धार्मिक संस्था लक डाउन भईसकेको छ । २०७२ सालको महाभुकम्प भन्दा पनि बढी पीडा कोरोनाले दिएको छ । हामी सबै घरभित्र बस्न बाध्य छौ ।सधैजसो चलायमान रहने हवाईसेवा ,यातायात ,बित्तियसंस्था,होटल ,पसल शिक्षण संस्था पुरै ठप्प भएको छ । जसका कारण मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोम पनि मणी हराएको नाग जस्तै सुनसान भएको छ । सरकारले एकसाता लकडाउन तोकेपनि यो अझै लम्बिनसक्ने संम्भावना बढी छ ।